अष्ट्रेलिया. Break n Links: Media for all - Across the globe
अष्ट्रेलियामा डढेलोमा परी तीनको मृत्यु, १५० घर खरानीमा परिणत
अष्ट्रेलियाको पूर्वी क्षेत्रमा बाक्लो वस्ती नजिक झाडीबाट सल्किएको डढेलोका कारण कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १५० घरमा पूर्ण क्षति भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गम्भीर प्रकृतिको मानसिक समस्या भएका अष्ट्रेलियाली उपचार गराउँदैनन्
अमेरिकामा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञविरुद्ध कडाइ,भ्रमण गर्दा पनि दरखास्त नै दिनुपर्ने
यो नियम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक बैठकहरू, स्थानीय तथा नगर निकायका अधिकारीसँगका बैठक, शिक्षण संस्थाहरूको औपचारिक भ्रमण र अनुसन्धान संस्थाहरूको औपचारिक भ्रमणमा लागु हुने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुरीकुरी 'अस्ट्रेलियन' एनआरएन : तिमीहरूबाट के सिक्ने नेपालले ?
एनआरएनको नवौ कुम्भमेलामा मातृभूमि फर्केका एनआरएनले जे जस्ता हर्कतहरू देखाइरहेका छन् , त्यो देख्दा लाग्छ- एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भनेर उनीहरूले राखेको माग ठीकै रहेछ । यस्तै हर्कत देखाउने एक बहादुर हुन् अस्ट्रेलियाका एनआरएन रमेशकुमार थापा । अध्यागमनको डेस्क तोडफोड गर्ने अस्ट्रेलियन नागरिक भैसकेका यी बहादुर प्रहरीको चिसो खोरमै पुगे । यस्तो खबर सुनेका नेपालीले नमिठो मान्दै प्रश्न गरे- जहाँ पुगे पनि नेपालीको मती उस्तै रहेछ, यस्तो भएपछि हामीले उनीहरूबाट के सिक्ने र ?
अस्ट्रेलियाले झारिदियो नेपालको लेभल : के हुन्छ यसको असर ?
अस्ट्रेलियाले नेपाललाई लेभल २ बाट झारेर लेभल ३ मा पुर्याइदिएको छ । यो भनेको आकाश नै खसेको हैन, नेपाली विद्यार्थीको अस्ट्रेलियाका लागि भिसा पाउँने सम्भावना अरू कम मात्र भएको हो । तर, एउटा ढोका बन्द हुँदा सम्भावनाका अरू हजार ढोका खुल्ने हुँदा कोकोहोलो र रोइलो गरिहाल्नु चाँहि पर्दैन । हो, यसले अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी खेती गरेर रातारात अर्वपति बनेका शैक्षिक परामर्शदाताको कमाइको ग्राफ भने ओरालो लगाउँछ ।
अस्ट्रेलियामा जन्मेको पहिलो नेपालीले मनाए ४५औं जन्मदिन !
अस्ट्रेलिया जन्मेको पहिलो नेपालीमूलको शिशुको नाम हो- संगम । न्वारान गर्ने कोही नभएपछि गणेश सामुन्ने नाम जुराइएका सङ्गम अहिले ४५ वर्षे वयस्क भएका छन् । आफ्नो मातृभाषा नेपाली पढ्न लेख्न नपाएकोमा विस्मत मान्ने उनी नेपाल भनेपछि हुरूकै हुन्छन् । चारपटक नेपाल पुगिसकेका उनी भन्छन्- मलाई लालिगुरास मन पर्छ , बासुरी र सारंगीको धुन मधुर लाग्छ ।
नेपाललाई अस्ट्रेलियाले नदिने भयो- ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ !
अस्ट्रेलियामा दुर्घटना गराउने नेपाली विद्यार्थी विमानस्थलबाटै पक्राउ
अस्ट्रेलियामा गोपाल र समीक्षाको निधन : घाइते छन्- सागर, संगीत र अश्विन !
अस्ट्रेलियामा ३० प्रतिशत आप्रवासी : १३औं स्थानमा नेपाली